AndroBox - Ezigbo Ntụrụndụ marlọ
Ihe na 06 / 04 / 2020 08 / 04 / 2020 by Androbox
Mee ka nke gị dị ọnụ ala site ebe a:
Ihe na Igbe Android, Nyocha, Video2 Comments
NVIDIA SHIELD TV | Onye ọkpụkpọ na-enuba n'ime Onye na-ahụ maka Remote & Game
Ihe na 10 / 11 / 2017 10 / 11 / 2017 by Androbox
Si na Amazon NVIDIA SHIELD TV
Ndụ Google ejikọtara - Nweta Google ọdịnaya gị niile na njiri mara ụlọ gị, kesaa foto Google gị na 4K, wee jiri Chromecast 4K kesaa ihe kachasị amasị gị na TV gị.
4K HDR Powerhouse - Lelee Netflix na Amazon Video na crisp 4K HDR, na YouTube, Google Play Movies & TV, na VUDU na 4K. Ngwa dị ka HBO Ugbu a, Spotify, na ESPN na-egbo mkpa ntụrụndụ gị niile.
Egwuregwu NVIDIA Kwadoro Egwuregwu - Egwuregwu nkedo site na PC GiForce nke PC gị na TV gị na 4K HDR na 60 FPS. Nweta egwu egwuregwu igwe ojii nke NVIDIA na arịrịọ gị na GeForce UGBU. Nwee obi uto egwuregwu Android naanị na SHIELD.
Smart Home dị Njikere - Onye nnyemaaka Google na-ahapụ gị iji olu gị na-ejikwa ntụrụndụ na ụlọ mara mma. Tinye njikọ SmartThings na eriri ọkụ, igwe okwu, ndị na-ahụ ọkụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ihe na Igbe Android, Nyocha, Videoakpado andrebox, igbe android, Nvidia, Nvidia Shield TV3 Comments
Xiaomi MI Igbe
Ihe na 22 / 09 / 2017 10 / 11 / 2017 by Androbox
GearBest Igbe Xiaomi Mi TV
Ihe na Igbe Android, Nyocha, Videoakpado andrebox, igbe android, Xiaomi MiHapụ ikwu
Mocute 054 bluetooth gamepad Ikuku Ejiri Aka Njikwa
Ihe na 22 / 09 / 2017 27 / 08 / 2020 by Androbox
Si ebe a nweta nke gị Oge 054
Ihe na Ngwa, Nyocha, Videoakpado Bluetooth, ihe njikwa, Aka Egwuregwu, ikuku, Xiaomi Mi, Xiaomi Mi Wireless Bluetooth Game njikwa njikwaHapụ ikwu
Yoka TV KB2 PRO Nyocha zuru ezu
Ihe na 05 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Nweta igbe gị dị ọnụ ala site ebe a
AliExpress Onyeka Onwenu
Ihe na Igbe Android, Nyocha, Video3 Comments
Ntụle zuru oke H96 Pro Plus
Ihe na 03 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Nweta igbe gị dị ọnụ ala site ebe a H96 Pro +
Ihe na Igbe Android, Nyocha, VideoHapụ ikwu
Ikuku ikuku 3 n'ime 1
Ihe na 02 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by Androbox
Bilie gị igwe useké dị ọnụ ala si ebe a Ikuku
Ihe na Ngwa, Nyocha, Video1 Comment
Nleta Ntụrụndụ Smarter Home
Ihe na 18 / 02 / 2017 24 / 02 / 2017 by AndroBox
Kedu ihe Igbe gam akporo na-eme?
Dị ka aha ya na-egosi, gam akporo Igbe dabere na otu ngwanrọ ngwanrọ a na-ahụ na ekwentị mkpanaaka, mana etinyere ya n'ọrụ na igwe onyonyo TV.
Igbe gam akporo na-eme TV ọ bụla ka ọ mara ihe karịa nke mara ihe, ọ dịka ijikọta ekwentị kacha mma ma ọ bụ mbadamba na steroid nwere nnukwu TV ma ọ bụ ihuenyo Projector na ụdị njikwa ọ bụla dị ka òké, keyboard, Gyro air mouse, njikwa egwuregwu, nkịtị TV remote wdg. iji nweta ahụmịhe kachasị mma onye ọrụ maka ọdịnihu. Chọghị PC dị oke ọnụ ma ọ bụ Egwuregwu Egwuregwu ọzọ iji nwee ike ịnwe ihe ntụrụndụ kacha mma. Nnukwu uru nke igbe gam akporo bụ nhọrọ iji wụnye ngwa Google ọ bụla na Kodi.
Na Kodi ị nwere ohere ile ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile n'efu na enweghị ndenye aha dị ka ihe ngosi TV, Ihe nkiri, Ọwa TV, Iyi, Youtube wdg.
Na ụlọ ahịa Google Play ị nwere ike iwunye egwuregwu gam akporo ọ bụla ma tinye ya na TV gị site na iji njikwa egwuregwu ọ bụla, keyboard ma ọ bụ òké. Ma ọ bụ ịnwere ike iji nhọrọ Miracast gosipụta ihuenyo gị ma kpọọ egwuregwu ọ bụla site na ama gị na nnukwu ihuenyo site na iji smartphone gị dị ka onye njikwa.
You nwere ike iwunye IP Tv ngwa iji lelee TV na-aga, ma ọ bụ jiri Netflix
Ihe ngosi TV na ihe nkiri, Android TV na-enye gị ohere igwu egwu, dika PlayStation TV na Amazon Fire TV na-eme. Android TV ga-adabere na onlọ Ahịa Google Play iji wepụta ọdịnaya, mana nchọta ahụ ga-agbaghakwa site na ọrụ ịgbanye ndị ọzọ dịka Netflix mgbe ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ n ’enweta Netflix, Blinkbox ma ọ bụ Prime Instant Video etinyere na gam akporo TV ma juo ya ka o lee ihe nkiri nke na-egosi Cate Blanchett, gam akporo TV ga-elele anya n’ime ha niile iji hụ ihe dị.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ị ga-enwekwa ike ilele TV mgbe niile, ọ bụrụ na nke ahụ na-ese n'elu ụgbọ mmiri gị.
Dị ka Chromecast, gam akporo TV gbanwekwara dị ka onye na-agba mmiri nwere atụmatụ Cast ya. Yabụ na ndị ọrụ nwere ike ịchọta ihe dị n'ime mobi ha ma ọ bụ ihe nchọgharị Chrome ma tụgharịa ya na TV Android ha, enweghị nchegbu.
Ihe na Igbe Android3 Comments
Airmouse 4 n'ime 1 T6 dịpụrụ adịpụ $21.11
Xiaomi MI Igbe S $99.99 $53.75
Xiaomi MI Igbe $101.43